फरार अभियुक्तबाट २२ करोड जरिवाना असुल
विराटनगर, २५ असोज । प्रदेश नं. १ का जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले २ वर्षको अवधिमा फरार अभियुक्तबाट २२ करोडभन्दा बढी जरिवाना असुल गरेका छन् ।
आव २०७५–७६ र ७६–७७ को अवधिमा प्रदेशका प्रदेशका प्रहरी कार्यालयहरूले २ हजार ५ सय २६ जना फरार अपराधीहरूलाई पक्राउ गरेका छन् । जसबाट कुल २२ करोड ९१ लाख ५१ हजार ९ सय ५९ रुँपैया जरिवाना असुल गरेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा प्रदेश १ बाट १ हजार ५ सय ४९ जना फरार अपराधीहरू पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेका फरार अपराधीहरूबाट ३ करोड ५६ लाख ९९ हजार ४ सय १६ रुँपैया जरिवाना असुल गरेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ ।
गत आव २०७६–०७७ मा प्रहरीले ९ सय ७७ जना फरार अपराधीहरूलाई पक्राउ गरी कुल १९ करोड ३४ लाख ५२ हजार ५ सय ४३ रुँपैया जरिवाना असुल छ । पक्राउ गरिएका सबै फरार अभियुक्तहरूलाई अपराधको प्रकृतिको आधारमा दण्ड र कैद सजाय गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ र २०७६–०७७ मा प्रहरीले सबैभन्दा बढी मोरङबाट क्रमश ः ५ सय १६ र ४ सय ४३ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूबाट प्रहरीले क्रमशः १ करोड १६ लाख ८९ हजार ७ सय ५७ र १७ करोड १ लाख ५८ हजार १ सय १५ रुपैयाँ असुल उपर गरेको १ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता कविन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो २ वर्षमा अपराधीहरूबाट असुल गरिएको कुल जरिवानाको ७९.३५ प्रतिशत रकम हो ।
प्रहरीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा झापाबाट पक्राउ परेका ८७ जना फरार अभियुक्तबाट १ करोड १२ लाख ९५ हजार, इलामबाट पक्राउ परेका ९२ जनाबाट २६ लाख ६७ हजार, पाँचथरबाट पक्राउ परेका ८ जनाबाट ६० हजार ४७, सुनसरीबाट पक्राउ परेका ३ सय १२ जनाबाट ११ लाख ८२ हजार र तेह्रथुमबाट पक्राउ परेका ७ जनाबाट २ लाख ८३ हजार रुँपैया जरिवाना असुल गरेको थियो ।
यस्तै प्रहरीले उदयपुरबाट पक्राउ परेका ५९ जनाबाट ३ लाख १३ हजार, खोटाङबाट पक्राउ परेका ९ जनाबाट १ लाख २५ हजार, ओखलढुंगाबाट पक्राउ परेका ३ जनाबाट २७ हजार ५ सय, सोलुखुम्बुबाट पक्राउ परेका ६ जनाबाट ५ लाख ९ हजार, संखुवासभाबाट पक्राउ परेका १६ जनाबाट १३ लाख ९६ हजार र भोजपुरबाट पक्राउ परेका ५ जना फरार अपराधीहरूबाट ४० लाख २३ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको १ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७५–०७६ मा प्रहरीले प्रदेशभरिबाट पक्राउ गरिएका अपराधीहरूमध्ये ८ सय ५० जनामाथि मुलुकी फौजदारी र ६ सय ९९ जनामाथि मुलुकी देवानीको कसुरमा मुद्दा चलाएको थियो ।
आव २०७६–०७७ मा भने फौजदारी कसुरमा ६ सय १ र देवानी कसुरमा ३ सय ६९ जनामाथि मुद्दा चलाई आवश्यक कारबाही गरिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ ।